DAAWO Somaliland & Khaatumo oo Heshiis xasaasi ah wada gaadhay (Akhri Qodobada lagu Heshiiyay) – Xeernews24
DAAWO Somaliland & Khaatumo oo Heshiis xasaasi ah wada gaadhay (Akhri Qodobada lagu Heshiiyay)
30. März 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa dalka Jabuuti maanta kusoo Xidhmay shirkii Wadahadalka ee u dhexeeyay Maamulada Khaatumo iyo Somalilannd, kaasi oo ka socday Maalmihi lasoo dhaafay.
Shirka ayaa waxaa laga soo saaray Go’aano ku saabsan in wadahadalku sii socdo, Arimaha Colaadaha, Nabadgelyada, Abaarta, Horumarinta deegaanada, In Odayaasha dhaqanka wixii ku saabsan Dhiig iyo Dhaqan lagala Tashado iyo Qodobo kale oo ku dhow Kuwii Horay uga soo Baxay Wadahadalii hore.
Wadahadalka ayaan Diirada Lagu saarin Arimaha Masiiriga ah, waxaana dad badan ku sheegeen inay la midyihiin Kuwii ka dhici Jiray Dalka Turkiga ee u dhexeeyay DF Soomaaliya iyo maamulka S.land ooArimaha Masiiriga ah aan Looga doodi Jirin. Lamana Hubo Halka ay Biyo dhigan doonaan.
1- Waxaa la isla qaatay in si sugan looga wada Shaqeeyo Arinta Nabadaynta, ee u dhaxaysa Beelaha Walaalaha ah ee ( Bahar-same iyo Qayaad ) Si Buuxdana loo taageero oo la Garab istaago Gudiga Nabadaynta ee Howshaa Gacanta ku haya.
A- in wixii Faro-gelin ah Gudaha iyo Debedaba ee wax yeelayn Kara Nabadaynta Labaasi Beelood meel looga soo Wada jeesto.
2-Waxaa si Buuxda la iskula Qaatay In howlaha Abaaraha iyo Horumarinta Deegaanadaasi la iska Kaashado si wada Jir ah.
3- Waxaanu Si wada Jir ah ugu Baaqaynaa in Hay’adaha Caalamiga ah iyo Kuwa Maxaliga ahba inay Howlgalaan Dhamaan Gobolada iyo degmooyinka aanay Hore u tagi Jirin, Halkaasi oo imika ayna wax Nabad-gelyo Daro ah ka Jirin, Loona sameeyo Gudi wada Jir ah.
4- Waxaa la iska gartay in maamul daadejintu aasaas u tahay Nabad ku wada Noolaanshaha iyo Kobcinta Awooda Bulshada, Sidaas Darteed waa in la gaadhsiiyo oo laga Abuuro Maamul iyo adeega Bulshada meelaha Aanay hore uga Jirin, Hay’adaha Samafalkuna ay doorkooda ka qaataan.
5- In meel looga soo wada jeesto wax kasta oo Caqabad ku Noqon kara Hanaanka Wada-hadalka Labada dhinac.
6- In wixii dhiig iyo Dhaqan ku saaabsan lala Kaashado Odayaasha dhaqanka si wada Jir ah.
7- Waxaa la isla qaatay in gudiga Farsamadu soo diyaariyo Shirka Danbe, Soona Cayimo Goorta iyo Goobta Sida ugu dhakhsaha Badan.
8- Waxaa la isla qaatay in yoolka Wada-hadalka uu Saldhig u yahay Is-aamid, Wada-shaqayn, Nabadgelyo Iyo Horumar dhankastaba ah.
Waxaa Saxiisay :
Gudoomiyaha Wafdiga khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar.
Gudoomiyaha Wafdiga Somaliland Maxamed Mixile Boqore
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/soma-an-d-khaa.png 180 279 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-30 14:43:032017-03-30 14:43:03DAAWO Somaliland & Khaatumo oo Heshiis xasaasi ah wada gaadhay (Akhri Qodobada lagu Heshiiyay)
Gam,ayeey Hurdada dheer. Wax ka baro Taarrikh Kooban oo ku saabsan Senator Roobleh Buraaleh.